FTTH internet optic inouraya bhokisi FODB-8a yakazokudziridzwa kuzoshandisa FTTH mhinduro pamusoro foni zvokugumisa kana kuparadzira feeder wire kuti faibha Manyiminya netambo, nama norwonzi, pigtail tambo maererano inokwana internet kugumiswa bhokisi. Kubatanidza rokupedzisira maira vanozvishandisa. FODB-8a ingashandiswa muzvivako, FTTH dzemukati, mapango, masvingo.
Chiyamuro / Output
In - 3 of Max dia of 17 neMM,
Out - 8 Max dia of 3 mm uye 1 Max dia of 10 mm
Kukura Fiber kugumiswa bhokisi vari 210x195x55, chii rakafara kukwana zvakakodzera faibha vachikotama nharaunda. Light uye zvinofadza nechitarisiko, bhokisi rine simba zvokuimba kudzivirirwa uye nyore yokuzvigadzirisa. Anopa nyore vanoshandisa kuwana kana mashoko mukana yakavakirwa FTTH.
Jera offers most completed product range of passive optical network accessories, for construction of FTTX solution. Such accessories as: Optic Pigtails, Splice protection sleeves, Fiber Adapter, Fiber Optic Cord, Fiber Optic Closure, FTTH Drop clamps, lead clamps, band and buckles, kunetsana okusungisa , etc.
Previous: Clevis wakakodzera insulator CLF-16
Fiber Optic Distribution Box 8 that cores
internet kugumiswa bhokisi
FTTH kugumiswa bhokisi
Manyiminya kugumisa bhokisi
kugumiswa mabhokisi Optical
telecommunication kugumiswa bhokisi